Izindaba - Ukuqhathaniswa kwezinzuzo kanye nokubi kokunamathisela izinyo elimhlophe, ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, umuthi wokuxubha omhlophe kanye nejeli emhlophe
Ukuqhathaniswa kwezinzuzo kanye nokubi kokunamathisela izinyo elimhlophe, ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, umuthi wokuxubha omhlophe kanye nejeli emhlophe
Udokotela wamazinyo waseLondon uRichard Marques uthe abanye abantu bazalwa benamazinyo aphuzi kodwa iningi labo lidalwa yizimo abazitholayo njengokudla ukudla okune-acid. Ama-asidi amaningi azogqwala amazinyo, abangele ukulahlekelwa koqweqwe lwawo kanye namazinyo abe phuzi. Ngaphezu kwalokho, imikhuba yansuku zonke yokubhema, ukuphuza itiye, nokuphuza nayo izosheshisa izinga lokuphuzi kwamazinyo.
Amazinyo Abamhlophe Indlela 1: Amazinyo Abamhlophe Patch
Ama-ejenti amhlophe aphansi ngokwakheka, asebenziseka kalula, futhi awabizi kakhulu, kodwa kuthatha isonto elilodwa kuya kwamabili ukususa umbala ebusweni bezinyo. Okubi ukuthi akulula ukumboza ngokuphelele uhla lwamazinyo, umphumela wokuba mhlophe awulingani, futhi kungenzeka ukulimaza izinsini noma amazinyo.
Amazinyo Abamhlophe Indlela yesi-2: Amazinyo Okukhanya Okuluhlaza Okuluhlaza Abemhlophe
Ukwenziwa mhlophe kwezinyo elikhanyayo okwesibhakabhaka okwenziwa ehhovisi likadokotela wamazinyo kungenza izinto zibe mhlophe, kunciphise isikhathi sokufiphala, futhi ngeke kuthinte ukujiya koqweqwe lwawo noma kulimaze amazinyo ngokuqondile. Le ndlela ingakwazi ukwenza amazinyo abe mhlophe emazingeni ayisishiyagalombili kuya kwayishumi isikhathi esingaphezu kwesigamu sonyaka, kuzuzwe imiphumela esheshayo yokushintsha amazinyo, kodwa intengo iyabiza.
Ngakolunye uhlangothi, eminyakeni yamuva nje, kuye kwaba nemishini eminingi ye-blue-ray yokwenza amazinyo abe mhlophe ekhaya, alula futhi asebenziseka kalula. Eminye yale mikhiqizo isuselwe ekusetshenzisweni kokudlidliza kwegagasi lomsindo ukuze kuzuzwe umphumela wamazinyo abe mhlophe. Eminye imikhiqizo idinga ukusetshenziswa nejeli. Iningi lemikhiqizo lithi yenza amazinyo abe mhlophe ngamadigri amathathu kuya kwamahlanu ngemva kokusetshenziswa.
Amazinyo Amhlophe Indlela yesi-3: Ijeli Emhlophe Yamazinyo Ekhaya
Ikakhulukazi nge-amine peroxide ejeli ukuze kuzuzwe umphumela wamazinyo abe mhlophe, okuyisithako esivame ukusetshenziswa kakhulu kubuchwepheshe bokublek. Vele ungeze ijeli emhlophe ethreyini yamazinyo eyenziwe ngokwezifiso ngaphambi kokulala, bese uyigqoka ukuze ulale, futhi ususe futhi uhlanze ithreyi yamazinyo lapho uvuka. Umphumela wokuba mhlophe ngokuvamile uthatha isonto ukuze ubonakale, kodwa ungenza amazinyo azwele futhi athambe.
Indlela yesi-4 yokwenza amazinyo abe mhlophe: gcoba ngamafutha kakhukhunathi
I-tooth oil gargle ibidumile emazweni ase-Europe naseMelika isikhathi eside, kanti futhi ingumkhuba omuhle ohlonishwa kakhulu osaziwayo abaningi. Akusizi nje ukwenza amazinyo abe mhlophe, kodwa futhi kunenzuzo kakhulu empilweni. Vele ugeze ngamafutha omnqumo imizuzu eyi-10 kuye kweyi-15 ngemuva kokuvuka ekuseni, noma usebenzise uwoyela kakhukhunathi ukuze ugoqe, bese uhlanza ngamanzi ukuze uvumele amagciwane asemgodleni womlomo ahambe.
Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, Amazinyo Amhlophe Ijeli kanye namathileyi, I-Ismile Home Teeth Whitening Kit Gel Led Light, Ukugcwalisa Ijeli Elimhlophe Amazinyo, Ikhithi ye-Led yokucwenga amazinyo, Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe,